‘सहमतिको सन्देश लिएर काठमाडौं फर्कन्छौँ’ – Gandak News
‘सहमतिको सन्देश लिएर काठमाडौं फर्कन्छौँ’
गण्डक न्यूज द्वारा २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १२:३९ मा प्रकाशित 0
नेकपा एमाले निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारी नेपालको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २७ र २८ फागुनमा पोखरामा हुँदैछ । पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ । कास्कीमै सचिवालय स्थापना गरेर चौतारीकर्मीहरु तयारीमा जुटेका छन् ।
मूल व्यवस्थापन समिति संयोजक एवं प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष गणेश पाण्डे महाधिवेशनको तयारीका क्रममा पोखरामै खटिएका छन् । प्रस्तुत छ संयोजक पाण्डेसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानीः
प्रेस चौतारीको महाधिवेशन भोलिदेखि हुँदैछ । तयारी सकियो ?
कास्की जिल्लाको भेला, मूल व्यवस्थापन समितिको बैठक, महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक, जिंगल निर्माण, प्रचारात्मक भिडियो उत्पादन लगायतका काम हामीले ग¥यौँ । कास्कीमै सचिवालय राखेर कास्की शाखाको व्यस्थापनमा व्यवस्थित ढंगले काम गरेका छौँ । पोखरा आउने देशभरका पत्रकारलाई यो महाधिवेशन अविस्मरणीय बनाउने प्रयासमा छौँ । महाधिवेशनको उद्घाटन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि फागुन २७ गते पोखरा सभागृहमा गर्नुहुनेछ ।
महाधिवेशन पोखरामै ल्याइयो । यसको विशेष केही कारण ?
पोखरा पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको उर्वर ठाउँ हो । विगतमा पनि नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सञ्चारसँग सम्बद्ध क्षेत्रमा कास्कीबाट नेतृत्व छ । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा कास्कीले दिएको योगदान अतुलनीय छ । पत्रकारिताको उत्पादन, सक्रियताको हिसाबले पनि कास्कीको योगदान छ ।
ठूलाठूला कार्यक्रम गर्न रोजिएको ठाउँ कास्की हो । चौतारीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कुनै पनि महाधिवेशन भएको थिएन । पत्रकार महासंघका साधरणसभा भए पनि चौतारीको कार्यक्रम भएको थिएन । प्रेस चौतारीको ईन्चार्ज, पार्टीका उपमहासचिव, प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरूङ यसै प्रदेशको नेता र संस्थापक मुख्यमन्त्री भएको हिसाबले सन्देश दिनकै लागि पनि हामीले कास्की रोजेका हौँ ।
'महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । एक हजार बढि प्रतिनिधि, सल्लाहकार, अतिथि पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ । पोखरा आउने देशभरका पत्रकारलाई यो महाधिवेशन अविस्मरणीय बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । नेतृत्व मात्र होइन नीतिगत रुपमा पनि यो महाधिवेशन उदाहरणीय बन्नेछ ।'
गणेश पाण्डे संयोजक, मूल व्यवस्थापन समिति